Google Earth gosipụtara data mmetọ ikuku | Netwọk Mgbasa Ozi
Vidio: Google Earth na-egosi data mmetọ ikuku
Mmetọ bụ otu nsogbu kachasị njọ nke ihe a kpọrọ mmadụ kpatara, ọkachasị nke anyị bi na mba ndị akpọrọ "mba ndị mepere emepe." N’ezie ị gụọla ọtụtụ oge, mana ị jụtụla ọtụtụ obodo na-emerụ emerụ?
Ugbu a, Google Earth na-enye anyị data gbasara mmetọ ikuku ekele maka nkwekọrịta nkwekọrịta nke ụlọ ọrụ Aclima.
Google kemgbe mmalite ya amalitela ngwa iji mewanye ahụmịhe onye ọrụ. Ihe akaebe nke a bụ Google Maps, nke ị nwere ike iji ruo ebe ị na-aga, ihe nchọgharị Google nke dị mfe iji, yana Google Earth, ngwa nke na-enye gị ohere ịchọta obodo ma ọ bụ obodo ọ bụla n'ụwa. Nakwa, ọ chọkwara inye aka ị mata banyere mmetọ anyị na-ewepụta kwa ụbọchị.
Ọ bụ ezie na n'oge a na-ejedebe na San Francisco, n'ọnụ mmiri, mpaghara etiti nke ndagwurugwu ahụ na Los Angeles, yana agbanyeghị na ọ nọ na mpaghara nnwale, ebumnobi bụ iji nwee ike ije ozi dị ka ụzọ ịtụ anya mmetọ. ọnọdụ nke ụbọchị, yana iji mụọ ihe nhụjuanya nke mmetọ ahụ ma dozie ha. Ọmụmaatụ, na-egosi na okporo ụzọ ndị okporo ụzọ na okporo ụzọ gbochiri na n'okporo ámá na ime obodo na-emetụta usoro mmetọ ikuku mpaghara.
Maka ugbu a, emechiri data ahụ, mana ndị na-enyocha mmetọ ikuku nwere ike ịrịọ ịnweta ya site na dejupụta mpempe akwụkwọ. Ruo ugbu a, ụlọ ọrụ abanyela ihe karịrị XNUMX ijeri akara data ikukumana n’ọdịnihu ọ nwere ike bụrụ ezigbo ihe mgbakwasị ụkwụ na-emetọ mmetọ oge.
Lee vidiyo a:
Kedu ihe ị chere gbasara nnwale Google ọhụụ? Ì chere na ọ ga-aba uru n'ezie?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Vidio: Google Earth na-egosi data mmetọ ikuku
Ọ bụ mmadụ mere mgbanwe ihu igwe